Abdi-Hamid_Humad_Dirane waa kuma ? – Xeernews24
31. Dezember 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Àbdi Dirane waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo soo jeeda galbeedka gobolka Sitti; Abdi wuxu ku dhashay magaalada UDUFO 1994-kii. Gc Abdi wuxu bartay cilmiga siyaasada isaaga oo baxay jamacada Mekelle University ee Gobolka Tigray 17kii bishii November ayaa laga afduubay magaalada Diridhaba. Afduubay waxa ka danbeeyay xukumada DDS.
Maxa loo afduubay?
Waa maxbuus loo afduubay damiirkiisa
Abdi humdi waxa loo afduubay maxad u didey darxuumada, maxad dareen u yeelatay. Iyo maxad dadkaagga ugu dajiisay qorshaha iyo farsamooyinka badbaadadayey iyaaga. Waa geesi badbaadshay kumaanan la xaasuuqi laha
ABDI HUMADI waa shaqsiga soo hindisay qorshihi lagu badbaadadshay magaalada UDUFO ee lagaga difaacay cadowgi xalaalsaday dhiga shacabka Soomaaliyeed ee ku hoos nool gumaysiga Itoobiya.
Abdi humdi waxa shirqoolay oo intay afduubeen cawadowga uv gacan galiyay MW MASFIN, Aden Doqon,Ibrahim qoyan iyo odayaal dhaqameedk reer Sitti.
Laakin waa maxay sababtoo?
Halkan ka ogow 6 arrimood oo sabab u ah afduubkiisa
1 Abdi Humadi Dirane wuxu badbaadadshay UDUFO oo loo qorsheeyay in la barakacsho ooy dhulka Canfartu la wareegto. Taasi waxay lid ku ahayd heshiiskii aha dhulka ka Soomaaliyeed canfartu la wareegto islaamarkana wax difaaca ah loo fidin. Canfarta oo laga difaacay udhufo
Oo ka badbaadaday gacanta cadowga waxay si toosa uga cadheysisay dhig miratada sida Abiy Ahmed, Adan farah, Mustafa Cagjar, Ibrahim osman iyo dhasha Gumeystayaasha ee damiirka iyo dareenka Soomaalida ka arradan.
Mas’uuliyiinta DDS ayaa u qaadday cadawotinimo
Kadib markii u kaga ciyaaray shirqoolaadi aay la damacsanayee in la maariyo halkii aay maareen Garboissa iyo Cadeystu Maadaamu Abdi humdi dirane istaago dajiyey qorshayashi lagu difaacay shacabka daggan magaalada UDUFO iyo agagga xuduudaha sababtoo difaacdda dhulkasi waxay carqalaad ku ahayd heshiiski ee saddex-geesoodka ah ee horey lis kula meel dhigay
2 Reer UDUFO waxay difaacdeen dhulkoodi iyo
naftoodi taaso oo ka soo horjeeda danaha Madaxda. JIGJIGA,Diridhaba,Samara iyo AddisAbaba.
3 Shacabka galbeedka gobolka sitte ayaa diiday in ay ka qayb qaataan dagaalkii Woqooyi ka socdey ee TPLF lagu la dagaallamayey.
Guud ah shacabka gobolka Sitti iyo dhalinyaradi galbeedka Sitti ee u hormoodka u ah halgama Abdi humdi dirane ayaa arrinka gabi ahaanba ka soo horjeestay. Taasi waxay horseedi inay maamulka DDS ka baadhaan daggan sidi Abdi humdi dirane looga fara xalan laha.
4 shacabka galbeedka Gobolka sitte waxay dideen aay ka barbar dagaalamaan ciidamada difaaca qaranka Itoobiya maadaamay ciidamada Itoobiya iyaga oo ku sababayey
Inay shalay ka qayb qaataan xaasuuqi Garboissa sidokale aay dawladda federaalka iyo dawlad-deegaanka Soomaalida aay iska indho-tiren gabood faladii loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xuduudka labada deegaan ee Cafarta iyo Soomaalida
5 Abdi Humadi dirane iyo geesiyo kale ayaa soo jeediyay in la xoreeyo magaalada Cadeytu iyo Garboissa intay Canfartu ku mashquulsantah dagaalka ay kula jiraan TPLF.
Madaxda DDS ayaa amar ku bixiyey ina la qaadi karin wax dagaal ah oo lagu xoreeynayo dhulkaas maadaamu wadanku ku jiro xalaad dagaal. Iyaaga oo sheegay inuu Rw Itoobiya Dr Abiy Axmed ka codsaday in aay Soomaalidu wax dagaal ah la galin canfarta sii loo soo ceshado
Dhulkii aay canfartu xogga ku qadatay ee ka baxay gacanta Soomaalida.
Taasi waxay Keentay inay dhalinyaradi iyo shacabki Abdi humdi hogaaminayey ka biyo didaan
Abdi wuxuu ku adkaystay go’aankiisi ah la xoreeyo dhulka.
Abdi humdi dirane wuxu soo bandhigay oo la wadaagay qorba joogta iyo dadka daneya galbeedka gobolka sitte inan waxa gar